आफू चाहिँ तामझामसँग करोडौँ खर्च गरेर विबाह गर्ने, मध्यरातमा पार्टी दिने, अनि माझी वस्ती बनाउन अरुसँग रुँदै पैसा माग्न हात फैलाउने भन्दै श्वेतालाई खुलापत्र – Gazabkonews
आफू चाहिँ तामझामसँग करोडौँ खर्च गरेर विबाह गर्ने, मध्यरातमा पार्टी दिने, अनि माझी वस्ती बनाउन अरुसँग रुँदै पैसा माग्न हात फैलाउने भन्दै श्वेतालाई खुलापत्र
जब मंगलबार कु’टपिटको विषयमा सामाजिक सञ्‍जालमा फ्या’ट्टफुट्ट जि’ज्ञासा आउन थाले, अचानक श्‍वेता खड्काले एउटा समाचार सेयर गरिन् । समाचार थियो, धुर्मुस सुन्तलीलाई रंगशाला बनाउन पैसा नपुगेको । उनले यो समाचार सेयर गर्दै आफूलाई पनि माझी बस्ती बनाउन पैसा नपुगेको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन’कोझैँ हाम्रो पी’डा पनि उही हो।
निर्माणाधीन माझी बस्तीले पनि ऋण बोकेर नै बसेको छ । स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्‍न दाताहरूलाई माझी बस्तीसँग जोडिदिने हाम्रो प्रयासमा धेरै मनकारी सहयोगीहरू भेटिनुभयो अनि आफ्नो क्षमता, दक्षता र गच्छेले भ्याएसम्मको सहयोग गर्नुभयो।
हामीले त सहयोगको अपिलसम्म गर्ने हो, ब’ल’ज’फ्ती गर्ने होइन । तथापि, आफ्नो प्र’तिबद्धता र क’टिबद्धतालाई भुलेर गरिबहरुको आशा र भरोसा माथि खेलबाड गर्नु भने पक्कै राम्रो होइन ।पूरा गर्न नसक्ने वाचा, पूर्ति गर्न नसक्ने आ’श्वासन र दिन नसक्ने सहयोगको कुनै अर्थ छैन।
श्‍वेताकै स्ट्याटसमा कमेन्ट गर्दै यमुना खड्काले धेरैको प्रश्‍न मु’खर हुने गरी सोधेकी छिन्, ‘करोडौं खर्च गरेर बिहे गर्दा त्यो माझी बस्ती जुन आफुले हिम्मत गरी निर्माण सुरु गर्नुभो त्यही प्रोजेक्टको ऋणको भारी अलिकति पनि सम्झनु भएन दिदी ? माग्‍ने बाटो पनि राखेको भए हुने महिनौँसम्म बिहे र पार्टी नै चल्यो अब आएर फेरि हात फि’जार्दै हुनुहुन्छ।
तर यति भनिरहँदा तपाईंको व्य’क्तिगत जीवनको वि’रोधी हैन म । यति समाजसेवी भावना भएकी एउटा महिलाले त्यति त सो’च्नु सक्नुपथ्र्यो भन्‍ने मात्रै हो ।’ यमुनाको यो कमेन्टमा ८० छेउछाउ जवाफ छन् र जवाफ लेख्‍ने अधिकांशले उनको टिप्पणीको समर्थन गरेका छन् । श्‍वेताले दोस्रो विवाह गर्नु अगाडि उनले स्वर्गीय पूर्वपति श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग प्रसंगमा बोलेका कुरा बिर्सौं । उनले उसबेला जि’न्दगी नै बिहे न’गर्नेदेखि श्रीकृष्ण श्रेष्ठको फोटो घरमा टाँ’स्नेसँग विवाह गर्नेसम्मका कुरा बोलेका कुरा बा’हिरिएका थिए।
उनले विवाह गरिन् त्यसमा कसैलाई गु’नासो पनि हैन तर आफू चाहिँ ता’मझामसँग खर्च गर्ने अनि समाजसेवा गर्न अरुसँग हात फै’लाउने कुराले उनको क’थनी र क’र’नी’मा प्रश्‍न उब्जाउँछ । कमसेकम बस्ती निर्माणका लागि अरुसँग हात फै’लाउनु अघि श्‍वेताले यो प्रश्‍न आफूलाई सोध्नुपर्छ । यो श्‍वेतामा मात्र होइन, समाजसेवाका नाममा स’क्रिय भइरहेका सबै सेलिब्रेटीले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्‍न हो । यसको जवाफ ढि’लाचाँडो धुर्मुस–सुन्तलीले पनि दिनुपर्छ नै । अझ श्‍वेताको जीवनशैलीले उनको समाजसेवालाई झन् पे’चिलो बनाएको छ।
अलि कुरा बुझ्नुभएन भने डा. गोविन्द केसीको नाम पनि सुन्‍नु भएकै होला । गोविन्द केसीले देशविदेशमा स्वास्थ्य शि’विर चलाउँछन् । उनलाई पनि धेरैले सहयोग लिनुस् भन्छन् । तर, उनी पहिले आफ्नो तलब र अहिले पे’न्सनबाट पाउने पैसाले मात्र गाउँगाउँ पुगी स्वास्थ्यसेवा गर्छन् । उनको जवाफ जवाफ हुन्छ— मा’गेर अरुको पैसामा मलाई स’नतुष्टि हुँदैन ।महावीर पुन र गोविन्द केसीको सादा जी’वनशैली देख्नुभएको छ । आफू भ’ड्किलो जीवन रमाउने अनि मा’गेको पैसाले सेवा, यो त अलि ह’जम भएन कि !